Laba Siyaabood oo Wax -ku -ool ah oo lagu kobciyo Liiskaaga emaylka | Martech Zone
Waxaan si gardarro leh u kobcinaynaa barnaamijkeena warsidaha iimaylka waxaanan qirayaa inaan sameeyo… Martech Zone warsidaha maalin kasta. Dhab ahaantii, waxaan ku kornay ku dhawaad ​​3,000 oo macaamiil bilihii la soo dhaafay! Waxaa ka sii muhiimsan, taraafikadaasi waxay sii wadaa inay macaamiisha dib ugu celiso balooggeena iyo xayeysiiyayaasheena iyo kafaala -qaadeyaashayada. Haddii aadan haysan barnaamij emayl si aad u qabato dadka oo aad ugu celiso goobtaada, baloogga ama sumadda… waxaad lumineysaa macaamiil badan oo suurtagal ah.
Labada hab ee ugu dhaqsaha badan ee lagu kobciyo liistada warsideyaasha suuqgeynta waxay ahayd:
Ku darista xiriir kasta oo khuseeya taas oo nagu soo gaadhay mareegtayada ama emaylka. Tani xitaa waxaa ka mid ah xirfadlayaasha xiriirka dadweynaha ee nala soo xiriira si aan u dejino fikradaha dhajinta barta (saacad kasta).
Ku darida qof walba ee shabakadeyda - laga bilaabo buuggayga cinwaanka iyo xitaa LinkedIn. Waxa xiisaha lihi, waxaan ka helay waxoogaa ka -reebitaan ah nin samatabbixin iimayl ah oo aan ku daray qiyaastii 6 bilood ka hor… ).
Waxay si fiican u shaqeysaa waxaan jeclaan lahaa inaan helo qalab otomaatig ah oo shaqada lagu geeyo. Waxaan jeclaan lahaa inaan haysto aalad guratay dhamaan emayllada soo gala isla markaana si toos ah qofka ugu daro liiska warsideyda. Si xiiso leh ayaa ku filan, waan arkay taas GetResponse ayaa ku daray isdhexgal la mid ah tan ka dhex jirta boosteejadooda emailka. Midigta midig waa dhammaan ilaha ay isticmaaleyaasha GetResponse ka soo jiidan karaan macaamiisha.
Haddii macaamiishayda cusubi helaan emaylka oo ayna jeclayn? Wax walwal ah malahan - waxay si fudud iskaga saari karaan. Tani waa dhaqan la oggol yahay warshadaha… laakiin had iyo jeer laguma taliyo. Haddii aad u malaynayso inay tani tahay wax laga naxo (sida inta badan xirfadleyda gudbinta emaylka), dan kama lihi. Labadaba waxaan kobcinayaa warsideheena, waxaan ku kordhinayaa taraafikada goobta oo wali waxaan ilaalinayaa furitaan aan caadi ahayn oo aan gujiyo qiimayaasha. Sidoo kale, waxaan sii wadaa 0% cabashada cabashadayda iyo ka -reebitaan -ka -bixintaydu waxay ahayd 0.41% wargeyskii ugu dambeeyay ee aan diray.
Furaha waxaas oo dhan, dabcan, waa laba laab:
The tayada nuxurka wargeyskeena. Waa muhiim. Waa wakhti ku habboon. Waana war bixin iyo xirfad ahaan loo qaabeeyey. Iimaylkii ugu dambeeyay ayaa xitaa kor u qaaday dhacdo. Kaliya kumaan helin hal cabasho, lammaane is -beddelay!
The mugga macaamiisha cusub Waxaan ku darayaa toddobaad kasta aad bay u yar tahay. Ma ku tuurayo 10,000 oo macaamiil ah oo aan 'ka helay' liiska wargeyskayga… Waxaan ku darayaa 20 illaa 50 macaamiil toddobaad kasta…
Runtii waxay beddeshay habdhaqankeygii oo dhan ee ku aaddan suuqgeynta emaylka. Mar dambe ma lihi laba-doorbidid waxaanan ku daraa email kasta oo aan la soo xiriiro si xirfad leh. Xitaa waxay iga dhigeysaa inaan isweydiiyo bal inay tahay waqtigii aan heli lahaa liiska xirfadleyda suuqgeynta. Haddii aan sidaas sameeyo, aniga doono soo dir warqad casuumaad ah si aanan halis ugu gelin inaan liiskeyga dhaawaco.
Ma hubo sababta iibiye kasta oo iimayl ahi uusan tan ugu darin ururinta aaladaha. Mahadsanidin GetResponse… Waxaan u maleeyay in aan ahay xoogaa asal ah oo sii kordhaya liiskayga. Waxay u muuqataa inay ciyaarta ka horreeyaan.
Waa fikrad aad u dhiirran! Laakiin dhinaca gadaal - haddii xirfadle kasta oo aan la xiriiro aan ku daro joornaalkooda anigoon weydiisan / ogolaansho bixin - aad baan uga xanaaqi lahaa.
Ku dar intaas - mawduucaaga - waxyaabaha aad ka kooban tahay waa wax qof walba uu jecel yahay. Uma maleynayo in taladani ay quseyso dhamaan warshadaha.
Waxaad ku garaacday ciddiyaha madaxa, Bobbie! Kaliya maahan inay ahaato mid khuseeya, waa inay qiimo u leedahay dhagaystayaasha.
Doug, badiyaa waxaan aqriyaa qoraalada aqristahey RSS, laakiin kani wuxuu ahaa mid laga cabsado oo kufilan kara joogsiga iyo faallooyinka. Waan ku raacsanahay 100% waana la xanuunsanayaa emaylka nazi ee isku dayaya inuu alaabtooda ka dhigo mid adag marka ay kuwa kale ee dhexdhexaadiyeyaashu ay si aad ah isugu dhex jiraan.